सिक्का मास्टर: यी ट्रिकहरूको साथ निःशुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्नुहोस् | ग्याजेट समाचार
सिक्का मास्टर सबैभन्दा फॅशनेबल खेल हो जुन हामी हाल स्मार्टफोनका लागि फेला पार्न सक्छौं। यो दुनिया भर मा लाखौं खेलाडीहरु छ, नि: शुल्क सिक्का र तिनीहरूको प्रगति को लागि स्पिन को खोज मा आफ्नो साहसिक प्रवेश। यस खेलको उद्देश्य मूल रूपमा करोडपति बन्न र बिस्तारै सम्भव भएमा उत्तम गाउँ निर्माण गर्न हो। यस खेलको मेकानिकीहरू वास्तवमै सरल छन्, स्लट र लडाईहरूको निरन्तर मिनी-खेलहरूमा आधारित।
तर यो अवशिष्ट सफलता होइन जुन यस खेलले प्राप्त गर्यो, हालसालै हामीले जान्यौं कि यसले सबै शक्तिशाली क्यान्डी क्रश सागालाई पार गर्यो। यसका खेलाडीहरूको सबैभन्दा ठूलो अनिश्चितता कसरी धेरै स्पिनहरू र नि: शुल्क सिक्काहरू प्राप्त गरिरहने भन्ने बारे थाहा छैन। तथाकथित "सिक्का" वा "फ्रि स्पिन" प्रगति गर्न बिल्कुल आवश्यक छ। यो मुक्त स्पिनहरू केहि ट्रिकहरू छन् कि हामी यस लेखमा प्रकट गर्छौं।
1 सिक्का मास्टर भनेको के हो?
1.1 सिक्का मास्टरको सफलता
1.2 कसरी खेल्ने
2 सिक्का मास्टरमा निःशुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्नुहोस्
2.1 अन्य विधिहरू नि: शुल्क सिक्का र काँडा प्राप्त गर्न
3 चमत्कार वेबसाइट वा ह्याकहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
4 नि: शुल्क संसाधनहरू प्राप्त गर्न अनुप्रयोगहरू
4.1 सीएम पुरस्कार
4.2 सुँगुर मास्टर
4.4 लिंक मास्टर
सिक्का मास्टर भनेको के हो?
यो आईओएस वा एन्ड्रोइड स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सकिने खेल हो, जसमा एक विचित्रता छ र त्यो हो हामीले यसलाई हाम्रो फेसबुक खातासँग लि to्क गर्नुपर्नेछ। यसले विकासकर्ताहरूले यसलाई सम्मिलित गरेका छ किनकि मुख्य विचार यो हो कि यदि हामी लगातार आफ्नो रन काउन्टर भर्न पर्खिरहेका छैनौं भने, हामी हाम्रो फेसबुक सम्पर्कहरू खेलमा दर्ता गर्न प्रयोग गर्न सक्छौं, यसैले २ additional थप स्पिनहरू प्राप्त गर्दै। यद्यपि यस प्रकारका नि: शुल्क खेलहरूमा सामान्य जस्तो भए पनि हामी तिनीहरूलाई वास्तविक पैसाबाट सिधै खरीद गर्न सक्छौं।
खेल मेकानिकहरू धेरै सरल छन्, त्यसैले लडाईहरू विस्तृत छैनन्। हामी स्लट स्पिनको श्रृंखलाबाट सुरू गर्दछौं, जसले तपाईंलाई उनीहरूको पुरस्कारका साथ बढी वा कम पैसा जित्न नेतृत्व गर्नेछ। साथै हामी आफैंको रक्षा गर्न कवचहरू पाउन सक्छौं वा लडाई हथौड़ाले तपाईंलाई अन्य खिलाडीहरूको गाउँमा आक्रमण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। प्रयोगकर्ताहरू जसले यो कोशिस गरेका छन् निश्चित गर्दछ कि यो पहिलो क्षणबाट नै संलग्न छ, तर यो अझै पनि सानो आरपीजी कम्पोनेन्टको साथ मौकाको खेल हो।
सिक्का मास्टरको सफलता
यो क्यान्डी क्रश जस्तो कोलोसीलाई हराउन सजिलो छैन, साथै सबै आवश्यक सामग्रीहरू भएको खेल हुनु भन्दा पनि त्यहाँ यसको वितरकहरु द्वारा एक धेरै आक्रामक पदोन्नति पछाडि छ। तिनीहरूको विज्ञापन जताततै छन् र तिनीहरू ज्यानिफर लोपेज, एमिली रताजकोवस्कीदेखि टेरी क्रूजसम्म प्रसिद्ध प्रख्यात व्यक्तिहरू तारांकित गर्दछन्।
खेलaबाट सुरु हुन्छ स्लट मेसिन र केहि क्रेडिटहरू जुन हामीले पैसा प्रयोग गरेर खेल सुरु गर्नका लागि प्रयोग गर्नुपर्दछ, किनकि पैसा बिना त्यहाँ कुनै प्रस्थान छैन। यो मेशीन खेल खेल्नको लागि हाम्रो आयको स्रोत हुनेछ। यस पैसाको लागि धन्यवाद हामी सामान र वस्तुहरू किन्न सक्छौं: माथि उल्लिखित हथौड़ोंबाट, ढालबाट चेस्टहरू जहाँ हामी एक अनियमित वस्तु फेला पार्नेछौं।
स्पिनहरूमा हामी तीनवटा साना सुँगुरहरू बाहिर आउने सम्भावनाको सानो सम्भावना छ, यी तीनवटा साना सुँगुरहरूले हामीलाई «सिक्का मास्टर against बिरूद्ध युद्ध गर्ने सम्भावना दिन्छ। यो लडाईमा हामीसँग धेरै पैसा जित्ने सम्भावना छ हाम्रो भव्यहरू भर्न यदि हामी विजयी छौं। खेलमा प्रगति गर्न हामीलाई मद्दत गर्ने एक पुश।
हामीसँग विशेष स्पिनहरू छन्, जसमध्ये एउटा निलो तरलको तीन ट्यूबहरू हो जसले मिसनमा प्रवेश गर्न मद्दत गर्दछ जसमा हामी स्लट मेसिनको लागि थप अतिरिक्त स्पिनहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं।
अन्तमा खेलको विचार आधारभूत हो, हाम्रो गाउँ बढाउँदै आफूलाई अझ बढी शक्तिशाली बनाउनुहोस् र यसको लागि अन्य खेलाडीहरूलाई पराजित गर्न उनीहरूको सामना गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ र ती सबै संसाधनहरु को लुट। यसको नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि यदि एक खेलाडीले वास्तविक पैसा प्रयोग गर्दछ र अर्कोले गर्दैन भने, तिनीहरूसँग खेलाडी भन्दा बढी फाइदा हुन्छ जसले केवल निःशुल्क सामग्री प्रयोग गर्दछ। यस कारणका लागि हामी कसरी खुला स्पिनहरू प्राप्त गर्ने, वास्तविक पैसा खर्च गर्ने आवश्यकतालाई कम गर्न को लागी कसरी व्याख्या गर्ने छौं।
विकासकर्ता: मून सक्रिय
सिक्का मास्टरमा निःशुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्नुहोस्
सिक्का मास्टरमा नि: शुल्क स्पिनहरूको राम्रो मात्रा प्राप्त गर्न सब भन्दा सीधा र मुख्य तरिका सन्दर्भ हो। केवल साथीहरूलाई फेसबुक मार्फत हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार्न भन्नुहोस्, एकचोटि तिनीहरूले दर्ता गरे पछि हामी २ 25 नि: शुल्क स्पिन वा स्पिनहरूको बोनस प्राप्त गर्नेछौं। तर त्यहाँ पदोन्नतिहरू उपलब्ध हुनेछन् जहाँ 40० स्पिनसम्म रकम बढाउन सकिन्छ। हामीसँग खेलको आधिकारिक फेसबुक ग्रुप भित्र पनि सिक्का मास्टरमा सुन कार्ड पठाउन विकल्प छ।
स्पिन प्राप्त गर्ने अर्को तरिका उनीहरूको कवचहरू मार्फत हुन्। यसको लागि हामीले खेलमा बारम्बार प्रवेश गर्नुपर्नेछ र हाम्रो गाउँलाई हाम्रो ढाल खर्च गरेर प्रतिस्पर्धी आक्रमणहरूबाट जोगाउनु पर्छ। यदि हामी4सulate्कलन गर्छौं भने तिनीहरूले हामीलाई सित्तैमा स्पिन प्रदान गर्छन्। हामी ऊर्जा क्याप्सुल मार्फत नि: शुल्क स्पिनहरू पनि प्राप्त गर्न सक्दछौंEnergy उर्जा क्याप्सुलहरूको संयोजन प्राप्त गरेर हामी १० थप फ्रि स्पिनहरू जित्न सक्छौं। यी दुई विकल्पहरूले हामीलाई खेलको लागि पुरस्कृत गर्दछ, त्यसैले यो स्पिन्स प्राप्त गर्न यो अधिक सन्तुष्ट हुनेछ।
अन्य विधिहरू नि: शुल्क सिक्का र काँडा प्राप्त गर्न
सिक्का मास्टरमा सिक्का प्राप्त गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी र रमाईलो तरिका भनेको अन्य प्रयोगकर्ताहरूलाई युद्धमा सामना गर्नु हो, यदि हामीले तिनीहरूलाई हरायौं भने हामी राम्रो पुरस्कार पाउँछौं। रमाईलोको साथसाथै, यो विधि केही जोखिमपूर्ण छ किनकि यदि हामीले हरायौं भने यसले हामीलाई दण्ड दिन्छ, तर कुनै श doubt्का बिना यो सबैभन्दा फाइदाजनक विधि हो जसले हामीलाई अगाडि बढ्न ठूलो मात्रामा संसाधनहरू प्रदान गर्दछ।
अर्को चाल र मलाई लाग्छ कि सबैभन्दा सिफारिस गरिएको एउटा भनेको गाउँहरूमा बिग्रिएको वा ध्वस्त पारिएको घरहरूमा आक्रमण गर्नु हो। प्रयोगकर्ताहरूले प्राय: धेरै ठाउँहरूलाई आधा नष्ट गरेर पार गर्दछन्, जुन हामी लाभ लिन सक्दछौं किनभने ती घरहरूमा फ्याँकिएकाहरू भन्दा धेरै सिक्का छन्।
हामीले मुद्राको खोजीमा गर्न सक्ने यी सबै चीजहरू मध्येखेर उत्खनन प्रयोग गर्नु भनेको उत्खनन गर्दा सम्भव भएसम्म सिक्काको रूपमा खजाना भेट्टाउनु हो, सिफारिस भनेको यो हो कि तपाईंले सिron्क्रोनाइजमा २ प्वालहरूमा छुनुभयो। केहि सेकेन्डको लागि मार्ग, यदि त्यहाँ सिक्का खन्ने छ र तपाईं सिक्का को एक ठूलो रकम लिनुहुनेछ। यो छिटो खेल्न आवश्यक हुन सक्छ, यसको मतलब यो छ कि हामी यसलाई सकेसम्म छिटो गर्न तयार हुनुपर्दछ, किनकि असफल हुने र केहि हासिल गर्ने सम्भावना छैन।
चमत्कार वेबसाइट वा ह्याकहरू वेवास्ता गर्नुहोस्
यदि हामी सिक्का वा सिक्का मास्टर नि: शुल्क स्पिनहरूको लागि छिटो खोजी गर्छौं, हामी यूट्यूबमा लि with्कहरूको साथ धेरै संख्यामा भिडियोहरू फेला पार्छौं जसले हामीलाई शंकास्पद प्राथमिकताका वेब पृष्ठहरूमा निर्देशित गर्दछ। ती सबैमा आधार स्पष्ट छ, तिनीहरू वचन दिन्छन् कि यदि तपाईं आफ्नो ईमेल दर्ता र संबद्ध गर्नुहुन्छ तपाईंले सिक्का र स्रोतहरूको निःशुल्क मात्रा प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले पढ्नु भएको कुरामा विश्वास नगर्नुहोस्, यी सबै स्केमहरू हुन् जसले तपाईंको डाटा वा तपाईंको ईमेल प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दछ कपटपूर्ण ईमेलहरूको हिमस्खलन सुरू गर्न।
यस प्रकारको वेब पृष्ठ ती सबै ईमेलहरूको स्रोत हो जुन हामीले स्पाम वा जंक फोल्डरमा प्राप्त गर्दछौं। उनीहरूले ट्रोजनलाई पनि तपाईंको कम्प्युटर वा फोनबाट जानकारी चोर्न प्रयोग गर्न सक्दछन् यदि तपाईं कुनै प्रकारको प्रोग्राम स्थापना गर्नुहुन्छ भने। हामी त्यस्तो कुनै पनि विकल्पलाई पूर्ण रूपमा रद्द गर्नेछौं।
नि: शुल्क संसाधनहरू प्राप्त गर्न अनुप्रयोगहरू
त्यहाँ केही पूर्ण कानूनी अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई निःशुल्क स्पिनहरू र सिक्काको लागि प्रस्ताव वा पदोन्नतीहरू पहुँच गर्न मद्दत गर्दछ। हामी तिनीहरू मध्ये केही विस्तार गर्न जाँदैछौं।
कुनै श recommended्का बिना सब भन्दा सिफारिस गरिएको, यो एक अनुप्रयोग हो सामाजिक मिडिया मार्फत नि: शुल्क प्रस्ताव र संसाधनहरूको लागि खोजी गर्नुहोस्, जुन प्रयोगकर्तालाई सक्रिय राख्न र खेलमा चिपकाउन जारी गरिएको छ। यस अनुप्रयोगलाई धन्यबाद तपाईले खोज्न वा यी सबै तत्वहरू बारे सचेत हुन आवश्यक छैन। अनुप्रयोगमा एक नजरका साथ हामीसँग सबै चीजहरू हातमा हुन्छन्।
थप रूपमा, यस अनुप्रयोगले तपाईंलाई तपाईंको बेट्स x5 गुणा गर्न अनुमति दिन्छ। त्यसोभए जब तपाइँको पुरस्कारहरू पाउने कुरा आउँछ, तिनीहरू by द्वारा गुणा हुन्छन्। त्यसकारण तपाईले आफ्ना शत्रुहरूलाई आक्रमण गर्न र तिनीहरूको सिक्का चोर्नको लागि केवल एक थ्रो वा ha हथौड़ाका साथ लाखौं सिक्का प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस अनुप्रयोगको सब भन्दा नकारात्मक कुरा यो हो कि यो समावेश विज्ञापन एकदम पेचलाग्दो छ, जुन जब हामी यसलाई प्रयोग गरिरह्यौं भने धेरै कष्टप्रद हुन्छ।
विकासकर्ता: सीएम पुरस्कार
क्षेत्र मा अर्को धेरै लोकप्रिय अनुप्रयोग, यो अनुप्रयोग स्टोर मा अधिक १०,००० भन्दा बढी डाउनलोड छ। यसको साथ हामी दिनको औसत free० नि: शुल्क स्पिनहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं। जुन खेलमा अगाडि बढाउँदा हामीलाई धेरै उपयोगी हुन्छ। ईन्टरफेस केही हदसम्म तपस्या भएको छ तर धेरै सहज छ र यसले हामीलाई त्यससँग परिचित हुन कुनै पनि कुराको लागि खर्च गर्दैन।
सुँगुर मास्टर: नि: शुल्क स्पिन र सिक्का सुझावहरू
अघिल्लोसँग मिल्दो मिल्दो एप्लिकेसन समान रूपले कडाई भएको ईन्टरफेस छ। उनको संग हामी धेरै प्राप्त गर्न सक्छौं स्पिनको रूपमा नि: शुल्क सिक्का। केवल सबै सेक्सनहरू प्रविष्ट गर्नुहोस् हामीलाई कुन चाँहि भन्दा चासो लाग्छ जान्नको लागि। सिक्का हतियार, ढाल वा हाम्रो घरपालुवा जनावरहरूको लागि खाना किन्नको लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। यी सबै संसाधनहरू खेलमा उन्नत हुन महत्वपूर्ण हुनेछ हाम्रो स्पिनहरू पुन: लोड गर्न पर्खेर।
स्पिन मास्टर - नि: शुल्क स्पिन र सिक्का सुझावहरू
विकासकर्ता: प्रिओशा प्लाजा
अघिल्लो भन्दा फरक, हामी हेर्नको लागि एक धेरै मित्रवत ईन्टरफेस पाउँछौं। यो धेरै सहज छ र हामीलाई दर्ता गर्न अनुमति दिन्छ। हामीले यो कुरा मनमा राख्नु पर्छ कि यी स्पिनहरू जुन तपाईंले प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यो खर्च भयो र हामी प्रति दिन औसत sp० स्पिनहरू प्राप्त गर्न सक्दछौं, वा असफल भयो, एक दिनमा एक लाख सिक्का। यद्यपि यो थोरै देखिए पनि, हाम्रा रनहरू पुन: लोड हुन पर्खनु भन्दा यो उत्तम हुनेछ।
म आशा गर्दछु यी सबै टिप्स र तरिकाहरूले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ र यदि तपाइँ सहभागी हुन निर्णय लिनुभयो भने, हामी टिप्पणीहरू खण्डमा केही अधिक योगदान दिंदा हामी आभारी हुनेछौं। कुनै पनि सहयोगलाई स्वागत छ जब यो सिक्का मास्टरमा धनी हुने लक्ष्य प्राप्त गर्न आउँछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » घर » भिडियो खेलहरू » सिक्का मास्टर: यी ट्रिकहरूको साथ निःशुल्क स्पिनहरू पाउनुहोस्